Lapatinib အမှုန့် (231277-92-2) hplc≥98% | AASraw R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Lapatinib အမှုန့် (231277-92-2)
SKU: 231277-92-2. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Lapatinib မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (231277-92-2) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Lapatinib အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Lapatinib အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 136-140 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Antineoplastic အေးဂျင့်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Lapatinib အမှုန့်
generic အမည်: Lapatinib အမှုန့် (la PA ဆိုပြီးဖြူခလရ)
ကုန်ကြမ်း Lapatinib အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Lapatinib အမှုန့် HER2 အပြုသဘော (လူ့ epidermal growth factor receptor-2 ဟုခေါ်သောပရိုတိန်းပမာဏထုတ်လုပ်ကြောင်းကင်ဆာ) ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တခြားဒေသများသို့ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူလူဆက်ဆံဖို့အခြားဆေးဝါး (capcitabine) နဲ့အသုံးပြုတဲ့ဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်ပါတယ် အဘယ်သူပြီးသားအချို့နဲ့အခြားရင်သားကင်ဆာကုသခဲ့ကြပါပြီ။
Lapatinib အမှုန့်ကိုလည်းဟော်မုန်းကုထုံးညွှန်ပြတော်မူသောအဘို့ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor အပြုသဘော, HER2 အပြုသဘောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူသွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီး၏ကုသမှုများအတွက် letrozole ဟုခေါ်တွင်ဆေးဝါးအမျိုးအစားနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။
Lapatinib အမှုန့်ရင်သားကင်ဆာကုသရန်အသုံးပြုတဲ့ဆေးညွှန်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအခြားကင်ဆာကုသမှုမှမတုံ့ပြန်ခဲ့သည်ရင်သားကင်ဆာ၏အချို့သောအမျိုးအစားဆက်ဆံဖို့နဲ့အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။
Lapatinib အမှုန့်များပြားကင်ဆာဆဲလ်များကိုအချက်ပြလိုက်ခြင်းတဲ့အချို့သောပရိုတိန်း၏အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ရသောအလုပ် kinase inhibitors ကိုခေါ်မူးယစ်ဆေးအုပ်စုတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်သည်။
Lapatinib အမှုန့်များ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနီ, နာကျင်လက်ခြေ, ဝမ်းလျှော, အဖုများနှင့်ပျို့ချင်ပါဝင်သည်။
(capecitabine နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) -HER2-positive သွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: 1250 ရောဂါတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်လက်မခံနိုင်အဆိပ်သည်အထိ 1 ရက်ကြာသံသရာထပ်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ် 21 မှနေ့ရက်များ 21 အပေါ်တစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာနှုတ် MG ။
-HORMONE receptor-positive, (letrozole နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) HER2-positive သွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: 1500 စဉ်ဆက်မပြတ်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်နှုတ် MG ။
အကြံပြုချက်များဟောဒီမှာ capecitabine နှင့် letrozole များအတွက်ထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် -Consult ။
-HER2-အပြုသဘောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာလူနာ capecitabine နှင့်အတူပေါင်းစပ်၌ဤမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူကြိုတင်ကုသမှုစတင်မှ trastuzumab အပေါ်ရောဂါတိုးတက်မှုရှိသင့်ပါတယ်။
အဘယ်သူ၏မြင်းသရိုက်အနာ HER2 overexpress သူတစ်ဦး anthracycline တစ် taxane နှင့် trastuzumab အပါအဝင်ကြိုတင်ကုထုံးရရှိထားအဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်သွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူလူနာကုသမှုများအတွက် capecitabine နှင့်အတူပေးဆက်ကြသူများပေါင်းစပ်။
ဟော်မုန်းကုထုံးညွှန်ပြတော်မူသောအဘို့ HER2 အဲဒီ receptor overexpresses ကြောင်းဟော်မုန်း receptor-positive သွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူသွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီး၏ကုသမှုများအတွက် letrozole နှင့်အတူပေးဆက်ကြသူများပေါင်းစပ်။
သောက်သုံးသောချိန်ညှိနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမရရှိနိုင်; သို့သော်ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ pharmacokinetics အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ထိုး၏ထက်နည်း 2% ကျောက်ကပ်အားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ကြောင်းပေးထားထိခိုက်ခံရဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ဒေတာများကိုမရရှိနိုင်သေးပါ: Hepatitis ချို့ယွင်း (ကလေး-PUGH A / B) မှအလတ်စားပျော့ကိုနဂို။
နဂိုပြင်းထန် Hepatitis ချို့ယွင်း (ကလေး-PUGH ကို C): ဆေးထိုး Reduce:
(capecitabine နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) -HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: 750 မီလီဂရမ် / နေ့။
-Hormone receptor-positive, (letrozole နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: 1000 မီလီဂရမ် / နေ့
ပြင်းထန် HEPATOTOXICITY ကုထုံးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်: အပြီးတိုင်ကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်း။
comments: ဆေးသောက်ရန်ညှိနှိုင်းမှုအကြံပြုချက်များ pharmacokinetic လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံလျက်, ရရှိနိုင်မပါလက်တွေ့ဒေတာရှိပါတယ်။
ခိုင်မာတဲ့ CYP450 3A4 inhibitors နှင့် / သို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့ CYP450 3A4 သွေးဆောင်နဲ့အတူ CONCOMITANT အသုံးပြုမှု: ဖြစ်နိုင်လျှင် concomitant အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထိုးညှိနှိုင်းမှုအကြံပြုချက်များ pharmacokinetic လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံလျက်, ရရှိနိုင်မပါလက်တွေ့ဒေတာရှိပါတယ်။
ခိုင်မာတဲ့ CYP450 3A4 inhibitors နဲ့ CONCOMITANT အသုံးပြုမှု: မီလီဂရမ် / နေ့ 500 မှထိုး Reduce, ရပ်စဲ inhibitor လျှင်ပုံမှန်ထက်ထောက်ခံအုကူံပထိုးဖို့ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အထက်သို့ညှိနှိုင်းမှုမပြုမီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 ရက်သတ္တပတ်၏ washout ကာလခွင့်ပြုပါ။
ခိုင်မာတဲ့ CYP450 3A4 သွေးဆောင်နဲ့အတူ CONCOMITANT အသုံးပြုမှု: သည်းခံစိတ်ပေါ်တွင်အခြေခံတဖြည်းဖြည်းတက်-titrate ထိုး; သွေးဆောင်ရပ်စဲလျှင်ပြန်ခါတိုင်းလိုထောက်ခံအုကူံပထိုးဖို့ဆေးထိုးလျော့ကျသွားသည်။
(capecitabine နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) -HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: တိုးတက် 4500 မီလီဂရမ် / နေ့အထိထိုး။
-Hormone receptor-positive, (letrozole နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: တိုးတက် 5500 မီလီဂရမ် / နေ့အထိထိုး။
grade2သို့မဟုတ် Greater ပုံမှန်ဌာန'S အောက်ပိုင်းသည် LIMIT အောက်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ကြွင်း VENTRICULAR eject အပိုင်းအစများ (LVEF) OR LVEF လျော့နည်းသွား: ကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်း; LVEF ပုံမှန်ပြန်လည်သက်သာခြင်းနှင့်လူနာမျိုးကို Asymptomatic လျှင်2ရက်သတ္တပတ်၏အနိမ့်ဆုံးအပြီးလျော့ချထိုးမှာကို restart လုပ်ပါလိမ့်မည်။
(capecitabine နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) -HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: 1000 မီလီဂရမ် / နေ့
-Hormone receptor-positive, (letrozole နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာ: 1250 မီလီဂရမ် / နေ့
ရှုပ်ထွေး features တွေနှင့်အတူ grade3OR grade 1 သို့မဟုတ်2ဝမ်းလျှော (ပြင်းထန်ဝမ်းဗိုက်ကျဉ်းကျုတ်, အဆင့်2သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ပျို့သို့မဟုတ်အန်အလယ်အလတ်မှစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အတန်းကို, အဖျား, ရောဂါဆိပ်ပျံ့နှံ့, neutropenia, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးသွေးထွက်, ဒါမှမဟုတ်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်လျော့နည်းသွား): တဲ့အခါမှာဝမ်းလျှောနိမ့်ထိုးမှာမှုကိုပွနျဖွစျပှားနိုင်ပါစေ အဆင့် 1 သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းမှဖြေရှင်း။
(capecitabine နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်) -HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာလူနာများ: 1000 မီလီဂရမ် / နေ့
-Hormone receptor-positive, HER2-အပြုသဘောဆောင်သောသွားကြောင်းရင်သားကင်ဆာလူနာများ: 1250mg / နေ့
grade4ဝမ်းလျှော: အပြီးတိုင်အဆက်ဖြတ်ကုသမှု။
အခြားသတင်းများအဆိပ်သင့်, grade2သို့မဟုတ် Greater: ဆေးထိုး၏ပြတ်တောက်သို့မဟုတ်ပြတ်တောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါစေ; အဆိပ်အဆင့် 1 သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းမှတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသောအခါပုံမှန်ထောက်ခံအုကူံပထိုးမှာကို restart လုပ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိပ်ထပ်တလဲလဲ IF: ထိုး Reduce:
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း Lapatinib အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Lapatinib အမှုန့်ပြီးသားနဲ့အခြားဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုဆေးဝါးများနဲ့ကုသခဲ့ကြသူတွေကိုအတွက်အဆင့်မြင့်ရင်သားကင်ဆာ၏အချို့သောအမျိုးအစားဆက်ဆံဖို့ capecitabine (Xeloda) နဲ့အသုံးပြုသည်။ Lapatinib အမှုန့် kinase inhibitors ကိုခေါ်ဆေးတစ်လူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာများပြားကင်ဆာဆဲလ်များကိုအချက်ပြလိုက်ခြင်းသောပုံမှန်မဟုတ်သောပရိုတိန်း၏အရေးယူပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဤသည်ကင်ဆာဆဲလ်များပြန့်ပွားကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်နှေးကွေးကူညီပေးသည်။
သငျသညျ Lapatinib အမှုန့်ယူကြောင်းသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအပေါငျးတို့သပြောပြပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဆရာဝန်တွေ, သူနာပြု, ဆေးဝါးနှင့်ဆရာပါဝင်သည်။
သငျသညျ, မြည်းကြိုးကိုဖြည်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ (ဝမ်းလျှော) ဖွင့်နဲ့ပေါက်, စိတ်ဆိုးအစာအိမ်ရှိသည်, သို့မဟုတ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြော။ ဤအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းများရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
လျော့ရဲရဲနဲ့ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ (ဝမ်းလျှော) Lapatinib အမှုန့်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ပါပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံဝမ်းလျှောကအရမ်းဆိုးရွားခဲ့ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပျက်ပါပြီ။ သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူပြောဆိုပါ။
သငျသညျချောင်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ (ဝမ်းလျှော) ရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြော။ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့်အတူစစ်ဆေးနေခြင်းမရှိဘဲဝမ်းလျှောဆက်ဆံဖို့မကြိုးစားပါနှင့်။
သင်ဆရာဝန်များကပြောသည်ပါပြီအဖြစ်အသှေးကိုအလုပ် check လုပ်ထားပါပြီ။ ဆရာဝန်နှင့်အတူပြောဆိုပါ။
Lapatinib အမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကနှလုံး function ကိုစမ်းသပ်မှုများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်နှင့်အတူပြောဆိုပါ။
သငျသညျ digoxin ယူပြီးနေတယ်ဆိုရင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြော။ သင် Lapatinib အမှုန့်နှင့်အတူကယူနေစဉ်သင့်သွေးအလုပ်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ် check လုပ်ထားရှိသည်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျ Lapatinib အမှုန့်ကိုယူပြီးစဉ်ကိုယ်ဝန်တားဆီးဖို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုကိုသုံးပါ။
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ် Lapatinib အမှုန့်ကိုယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခဲ့လျှင်, သင့်ဆရာဝန်ကိုပဌနာ rightaway ။
Lapatinib ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း Lapatinib အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
ယင်း၏လိုအပ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူ Lapatinib အမှုန့်အချို့မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုလိုအပျနိုငျဖြစ်ပေါ်ကြပါလျှင်ထိုအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါငျးတို့သ Althoughnot, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Lapatinib အမှုန့်ကိုယူပြီးနေစဉ်အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမဆိုဖြစ်ပေါ်လျှင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူ Check:
, ရှိန်ပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာကွာအရေပြား, လျော့ရဲ
puffiness သို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းမျက်တောင်၏ဒါမှမဟုတ်မျက်စိပတ်လည်မျက်နှာ, နှုတ်ခမ်း, ဒါမှမဟုတ်လျှာကို
အနာစိမ်း, အနာ, သို့မဟုတ်နှုတ်၌ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ခမ်းပေါ်အဖြူအစက်အပြောက်
bronchial Secret ၏ thickened
Lapatinib အမှုန့်ထဲကတချို့ဟာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆေးဖို့ညှိကဲ့သို့ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုကုသနေစဉ်အတွင်းသွားစေနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုတားဆီးသို့မဟုတ်လျှော့ချရန်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမဆိုဆက်လက်သို့မဟုတ် bothersome များမှာဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုမေးခွန်းများရှိပါကလျှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူ Check:
နီခြင်း, ရောင်ရမ်းခြင်း, သို့မဟုတ်နာကျင်အသားအရေ
အနာစိမ်း, အနာ, ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ခမ်းပေါ်အဖြူအစက်အပြောက်, လျှာ, ဒါမှမဟုတ်ခံတွင်း၏အတွင်းပိုင်း
အစာအိမ်မအီ, စိတ်ဆိုး, ဒါမှမဟုတ်နာကျင်မှု
AASraw ထံမှ Lapatinib အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Lapatinib ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း: